Olomangan’ny hira feminista manerana an’i Afrika ho fankalazana ny Andro Iraisampirenena ho an’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Miantso ny fivelaran'ny vehivavy afrikana amin'ny alalan'ny hira ireto artista ireto
Voadika ny 08 Marsa 2022 11:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, عربي, English
Mpihira avy ao Côte d'Ivoire “Dobet Gnahoré” avy amin'i ND-Photo.nl izay voamarika ho CC BY-NC-ND 2.0.
Rehefa nanatevin-daharana izao tontolo izao hankalaza ny andron'ny vehivavy iraisampirenena ny sehatra tsimitsahaketrika Apple Music tamin'ny taona 2019, dia tsy nisy na dia iray aza vehivavy afrikana tao anaty fandaharan-kira Apple’s Global Feminism. Nampihiratra ny maso sy niteraka resabe momba ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fitongilanana eo amin'ny indostrian'ny mozika ny tsy nahitana ireo mpihira feminista monina eto Afrika. Herintaona monja talohan'io, namoaka ny lisitry ny mozika afrikanina taona 2018 ity goavambe teknolojia ity. Ny lisitra tamin'io fotoana io anefa dia nahitana mpihira vehivavy afrikanina fanta-daza, anisan'izany i Teni (Teniola Apata) teraka Nizeriana izay fariparitana matetika ho ilay kintan'ny mozika Afrikana Tomboy Feminista.
Koa satria manatevin-daharana an'izao tontolo izao ny Global Voices amin'ny fanamarihana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy amin'ity taona ity izay manana farangoteny ofisialy #BreakTheBias izay mikatsaka ny hanafaka amin'ny tontolon'ny fitongilanana, fitsarana antendrony sy ny fanavakavahana, dia ankalazainay ny zava-bitan'ireo mpihira Afrikana Feminista mpisava lalana izay miantso ny fivelaran'ireo Afrikana vehivavy namany amin'ny alalan'ny fandaharankira.
Jereo ny fandaharankira Spotify eto ambany ahitana ireo hira malazan'ny mpanakanto toa an'i Fatoumata Diawara, Cesária Évora, Shishani Vranckx, Thandiswa Mazwai, sy ny maro hafa!